Naya Post Nepal | पेट्रोलको मूल्य र ग्यासको मुल्य वृद्धि दोब्बर गर्न बनाउन आयल निगमको प्रस्ताव हेर्नुस कति-कति मूल्य ?
पेट्रोलको मूल्य र ग्यासको मुल्य वृद्धि दोब्बर गर्न बनाउन आयल निगमको प्रस्ताव हेर्नुस कति-कति मूल्य ?
काठमाडौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रा लयलाई १० बुादे प्रस्ताव पठाउादै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो । बिदाका दिन सवारीसाधनको प्रयोग कम हुने भएकाले तेलको खपत पनि कम हुने निगमको भनाई छ ।
अन्तराष्ट्रिय वजारमा बढ्दै गएको इन्धनको मुल्यले नेपालमा पनि असर गरेको छ । नेपाल आयल निगमलाई माग धान्न समस्या भएको छ । जसका कारण निगमले इन्धनको खपत घटाउने वारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेकोमुल निगमले नीजि सवारी साधन पनि कम चलाउनका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गराउन भनेको छ । जोर बिजोर प्रणाली हुादा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको ब्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ ।
निगमको प्रस्तावअनुसार अहिले १५५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलको लागत मूल्यअनुसार १८३ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । निगमको घाटा कम गर्न उक्त लागत मूल्य लिन पाउनुपर्ने निग मको भनाइ छ ।
हाल प्रतिसिलिण्डर १५७५ मा बिक्री भइरहेको ग्यासको लागत मूल्य पनि २२४० पुगेकोले सोही मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग निगमले गरेको छ ।
इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्बाधार शुल्क लगायतमा सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घ टाउन निगमले माग गरेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिमा उपभो क्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन निगमले १० बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरु त्साहित गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानको प्रस्ताव निगमले गरेको छ ।
इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मि लान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्रा ष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल १ सय डलर माथि कारोबार भइरहेको छ ।
२०७८ चैत्र १५, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 703 Views